Vaovao - Ahoana no fomba anampian'ny Inform Storage Shuttle System amin'ny rojom-panafody mangatsiaka?
1. nahoanamila toerana fitahirizana henjana ve ny fanafody anaty vata fampangatsiahana?
Ho an'ny fitehirizana sy ny fitaterana ny vaksiny, raha tsy mety ny mari-pana fitehirizana, dia hafohezina ny fe-potoana manankery ny zava-mahadomelina, hihena ny titer na hiharatsy, hisy fiantraikany ny fahombiazany ary hisy ny voka-dratsiny.Ny tranga mahery vaika, toy ny voakaikitry ny alika voan'ny haromotana, dia mahazo vakisiny tsy mahomby nefa tsy fantany, ary miharihary ny vokany.
2. Inona no atao hoe rojo mangatsiaka fanafody?
"Rojo mangatsiaka fanafody" dia rafitra rojo famatsiana manontolo izay midika fa ny zava-mahadomelina mila ampidirina amin'ny vata fampangatsiahana dia tsy maintsy ao anatin'ny tontolo ambany mari-pana voafaritry ny fanafody tsirairay avy amin'ny famokarana, fitehirizana, fitaterana, fizarana, varotra, mankany amin'ny fanafody marary sy rohy hafa, mba hiantohana ny kalitao sy ny fiarovana ny fanafody vata fampangatsiahana sy hampihenana ny fatiantoka, hisorohana ny loto.
Ny tontolo iainana azo antoka ho an'ny ankamaroan'ny vaksiny dia eo anelanelan'ny 2°C sy 8°C.
3. Ahoana no hiantohana ny fiarovana ny fanafody mangatsiaka rojo?
Fitehirizana mangatsiaka:Araka ny fepetra takian'ny GSP, mba hampitaovana ny fanaraha-maso mandeha ho azy, ny fampisehoana, ny firaketana an-tsoratra, ny fitsipika ary ny fanairana, ary ny fampiasana rafitra famatsiana herinaratra roa.
Famindrana ivelan'ny trano fanatobiana entana:Avy any amin'ny trano fanatobiana entana mankany amin'ny fivarotam-panafody sy ny paroasy, ny fanafody mangatsiaka dia tsy maintsy entina ao anaty vata fampangatsiahana mangatsiaka, ary voarakitra an-tsoratra ny fotoana miditra sy mivoaka, ary misoroka ny fanafody miala amin'ny fitaovana mangatsiaka mandritra ny fotoana maharitra.
Fitehirizam-panafody:Ny fivarotam-panafody dia manana rafitra fanaraha-maso ny mari-pana sy ny hamandoana mandeha ho azy, izay afaka manome fampitandremana mialoha momba ny mari-pana tsy ara-dalàna sy ny fanairana tsy fahombiazan'ny fitaovana ho an'ny fitaovana fampangatsiahana.
Inform Storage dia nandray anjara tamin'ny fananganana trano fanatobiana entana maro tao amin'ny indostrian'ny pharmaceutika nandritra ny taona maro, ary nahatakatra tanteraka ny filan'ny fitehirizana ny indostrian'ny pharmaceutique.Ny tanjona amin'ny toetran'ny rojo mangatsiakan'ny fanafody dia natomboka ny vahaolana mety amin'ny fitehirizana fanafody ao anaty fitahirizana mangatsiaka.
Fanafody Cold Chain Solution forShuttle Mover System
Fanafody Cold Chain Solution forMulti ShuttlePicking System
Inform Warehouse Management Software (WMS) dia manara-maso ho azy, mampiseho, mirakitra an-tsoratra, mandrindra ary fanairana ho an'ny fanafody ao anaty tahiry mba hiantohana ny fitahirizana fanafody azo antoka ao amin'ny rojo mangatsiaka.
Carton Live, Baby Shuttle, Conveyor, Shuttle amin'ny lalana efatra, Drive amin'ny Racking, Asrs Storage,